yini i-CNC Lathing? | I-PTJ hardware inc.
Ikhaya > Imisebenzi > CNC Lathing
Kuyini i-CNC Lathing?
Indima yokulawulwa kwamanani ekhompyutha (i-CNC) iyaqhubeka nokukhula, ihlangana nezinqubo namathuluzi wokunemba amaningi - kufaka phakathi ama-lathes. Ngokwalo, i-lathe ibhekisa emshinini wokubumba nokusebenza kwehardware yezinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi insimbi. Ngamandla we-CNC, le nqubo iyanda ngokunemba nokuphindeka, okuthuthukisa ukukhiqizwa kwezinto eziyinkimbinkimbi.Funda kabanzi ngokusebenza - kanye nezinzuzo nokusetshenziswa - kwemishini ye-CNC lathe engezansi.
Isebenza kanjani i-CNC Lathes
Kubalulekile ukubuyekeza izingxenye ezibucayi ze-lathes ze-CNC ukuqonda ukusebenza ngemuva kwazo. Izici zazo zifaka: ● I-Turret: Yengamela ithuluzi lakho lokusika, noma umsiki, ngokulinamathisela kulo.
● U-Chuck: Ubamba impahla yakho yomkhiqizo, eyaziwa nangokuthi i-vice.
● Isilayidi: Ivumela i-turret yakho ukuvula izimbazo eziningi ukusikeka okunembile.
● Umsiki: Wenza noma asike umkhiqizo wakho.
● Ukuqapha: Kuvikela opharetha wakho ngokuvalela indawo yokusebenza yensimbi ye-CNC.
● Isikhombimsebenzisi: Inikeza opharetha noma umqambi wakho wekhono ukuphatha zonke izinqubo zomshini wakho we-lathe we-CNC.
Inqubo yesinyathelo ngesinyathelo yokuthi i-CNC lathes isebenza kanjani kanje:
1.Isikhonzi silayisha idizayini esizwa nge-computer (i-CAD) noma idokhumenti ekhiqizwa yikhompyutha (CAM).
2.U-opharetha ufaka izinto ezidingekayo kanye nomsiki.
3.Umqaphi uyavala bese i-lathe iqala ukusebenza kulandela ukuvunywa yi-opharetha.
I-4.I-spindle, i-cutter ne-turret isebenza ngokubambisana ukuze ulolonge umkhiqizo wakho ngokuya ngepulani yakho.
Ngemuva kokuqeda, opharetha ususa okokusebenza futhi akuhlolisise amaphutha angahle abe khona.
Izinzuzo ze-CNC Lathes
Ukusetshenziswa kwe-CNC lathes kunikeza izinzuzo eziningana, kufaka phakathi:
● Ukunemba: Ukunemba kwe-CNC akunakulinganiswa, kudlula izinqubo zamatayitela zeminyaka edlule. Izinkampani ezikhiqiza izinto ngesikali esikhulu, lokhu kuyinzuzo enkulu engaholela emiphumeleni emihle ezindlekweni nasekusebenzeni kahle. ● Ukuphindeka: Lokho kunemba okungenakuqhathaniswa kwemishini ye-CNC lathe kuhumusha ekukhiqizeni okuphezulu. Bangakwazi ukukhiqiza kabusha idokhumenti yakho ye-CAD noma ye-CAM ngokuqeda amaphutha we-lathes yendabuko nokwenza ngcono ukuthenga kwakho kwempahla. ● Ukusebenziseka: Ukungeniswa kwetheknoloji endaweni yokusebenza kungaholela ekuthathweni kancane kwabasebenzisi. Abenzi be-lathes ye-CNC bakubonile lokhu, yingakho bakhe amathuluzi abo ukufaka isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula esithuthukisa amazinga wokutholwa futhi sinciphise amaphutha angaba khona ngenxa yamajika wokufunda.
● Ukukhiqiza: Izinzuzo ze-CNC lathe zokunemba, ukuphindeka nokusebenziseka konke kuxhasa ukwesekwa kwinqubo yokukhiqiza ekhulisa utshalomali lomsebenzisi ngokombono wezezimali nesikhathi, okungaholela ekuzuzeni kwezinye izindawo.
Izicelo ze-CNC Lathe Machines
Ezimbonini zonke, kusukela ekwakhiweni kuya ekuthuthweni, imishini ye-CNC lathe iyasiza ekukhiqizeni imikhiqizo eminingana, kufaka phakathi:
● Imigqomo yezibhamu
● Izinsimbi zomgwaqo
● Izinti zokubamba.
● Amalulwane e-baseball
● Futhi uma ubheka ukudala umkhiqizo wangokwezifiso ngokunemba kocingo lwe-CNC, ithimba lethu lingasiza.
Ithemba le-PTJ Factory, Inc. le-CNC Lathing
E-PTJ Factory, umlando nesipiliyoni sethu kuhlanganisa iminyaka engaphezu kwamashumi ayishumi kanye nezimboni ezahlukahlukene. Ngobungcweti bethu bokukhiqiza izingxenye zomshini wokunemba ngokwezifiso kanye ne-ISO 9001 yethu: ukugunyazwa kuka-2015, kanye nokuhlelwa kwethu kwemishini engaphezu kwama-35 enobuchwepheshe obuthuthukisiwe, siyizinketho ezethembekile zezinhlangano ezincane, eziphakathi nendawo nezinkulu - kufaka phakathi iFortune 500 Finyelela kumazinga wakho wekhwalithi ngokunemba nangobuchwepheshe be-The PTJ Factory, Inc. ngokuxhumana nathi namuhla.
Amazwana: CNC Milling Izikhungo,Isevisi Yokuguqula i-CNC,Isevisi ye-CNC Drilling